Izindlela Imininingwane ukudluliswa - kusukela isikhumba ukuze e-mail
Kusukela esikhathini eside esidlule, yoke imiphakathi zisekelwe isitoreji futhi ukudluliswa kolwazi. Ngokuhamba kwesikhathi, izindlela ukuthumela idatha zishintshile. Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi inkulumo. Ngomlomo lidlule milando legends, zazo umlando abantu savela. Khona-ke imigwaqo baphuthuma zithunywa izincwadi. Kuwo wonke amakhulu eminyaka baye baba Iposi lalingase liphathiswe kanye ezimpilweni zethu ezigxilile uxhumano ngocingo. Namuhla, izincwadi iphepha cishe bawela lingasetshenziswa nocingo ozongena esikhundleni ngokuphelele kwi-Inthanethi. Abantu abaningi ngokwengeziwe uthanda ukukhuluma nabantu kanye nokwabelana ngolwazi hhayi ocingweni futhi nge inethiwekhi ye-Inthanethi, ngoba basuke afihle esheshayo ukuthumela idatha ubuchwepheshe.
Nokho, naphezu kwentuthuko kwezobuchwepheshe, enye yezindlela esemqoka ukuba kudlule ulwazi oluthile uhlala ephepheni. Namuhla, imibhalo iyatholakala kuzo zombili iphepha kanye elekthronikhi. Ukuze exchange of imibhalo electronic kosuku ngalunye ekuthuthukiseni izindlela ezintsha ngokudlulisa ulwazi. Lapha endaweni yokuqala esithathwayo nge e-mail. Ngalo, umamukeli uthola incwadi cishe ngokushesha, angase noma izingxenye zomhlaba. e-mail amaseva umsebenzi sipho e-mail ukuthi ukusingatha izinkulungwane amabhokisi emeyili - akhawunti okuthiwa. Ngaphezu Imininingwane e-mail idluliselwa nge ICQ, Skype kanye nezinhlelo ezifanayo. Kukhona indlela elula xaxa yokuxhumana - le ngqungquthela ye-Inthanethi. inkomfa telephony Inthanethi awuzange esikhundleni ngenxa yokuthi adinga ukuxhumeka ngesivinini World Wide Web.
ukudluliswa kolwazi senzeka noma ngokusebenzisa inethiwekhi yekhompyutha noma nge zobuchwepheshe ezifana CD-Roms, Flash-ngemoto, futhi esikhiphekayo SSD-ngemoto. amanethiwekhi Ikhompyutha babe ngezigaba zabo. Ziyahlukahluka kuye ngokuya endaweni, yomphindwa, futhi indlela yokulawula. Iningi LANs encane Ukusabalala - ibanga bona phakathi ISIZINDA kuphela amamitha ambalwa. Indawo yesibili kuhlala amanethiwekhi ezinkampani - zitholakale ngaphakathi ehhovisi noma ibhizinisi. I enkulu yiyona network indawo, okuyinto ngokulandelana sikala, ihlukaniswe eemfundeni kanye nephasi loke.
Ngokwe yomphindwa we inethiwekhi zihlukaniswe ngezigaba ezintathu. Amakhompyutha ibhasi inethiwekhi exhunywe kwi-line efanayo, futhi ulwazi sisuka kwenye ikhompyutha ngeke ngokushesha zitholakale wonke umuntu. ISIZINDA indandatho inethiwekhi Ulandela nomunye. Ulwazi kulo idluliselwa ngendlela isiqondiso sohlangothi olulodwa. inethiwekhi Star kokuba central control unit, okuyinto diverge kusukela umugqa-ray ukuze babone ukuthi ezinye izindlala.
Izinhlobo inethiwekhi ukuphathwa ezimbili. Uhlobo "amaklayenti-server" inethiwekhi ukusebenzisa amaseva esikhulu, futhi amanye amakhompyutha kukhona amaklayenti azinamphumela kunethiwekhi. Ngo uhlobo okukhethekile yabo bonke ISIZINDA inethiwekhi baqiniseka alinganayo. Bona umsebenzisi ngamunye onquma lokho amafolda noma amafayela zizotholakala kuwo wonke. amanethiwekhi ezinjalo kakhulu kabi evikelwe nokugenca.
Zonke izindlela ukuthumela idatha kungenzeka babe okuyisifunda esisodwa. Kuhlanganisa Imininingwane umthumeli, isiteshi ukuwudlulisa Imininingwane umamukeli. Iziteshi kuhluke Imininingwane ukudluliswa izinga, ulinganiswa izingcezu / s nezimpinda yayo amagugu. Emhlabeni wonkhe, inethiwekhi Inthanethi imithombo yokwaziswa abizwa ngokuthi amaseva, kuyilapho labo ukuyisebenzisa - abathengi. Njengoba ojwayelekile, umthengi engena kunethiwekhi yomhlaba nge ye-fiber-optic. Nokho, muva nje, ayesetshenziswa ngokuvamile zihlanganisa engenantambo izindlela Ukufinyelela i-Inthanethi, asebenzisa ubuchwepheshe obufana ne-Wi-Fi noma i-Bluetooth. Umuntu angeke alithole kodwa khumbula amanethiwekhi eselula, njengoba abantu abaningi sebenzisa internet mobile noma 3G-imodemu, esebenzisa i-WAP noma GPRS yezifiso.
Ngakho, izindlela nokwaziswa transmission kuphumelele nomunye kwaze kwaba Inthanethi evulekile. Nge kusungulwa izidingo ezintsha zobuchwepheshe World Wide Web liba ethengekayo, kuyilapho akungeni esikhundleni zonke ezinye izindlela zokuxhumana.
Uyini izakhiwo computer?
Yekuchumana ku-IP indlela musa elintantayo
Umsebenzi elithola: owenza lokho
Fiberglass for Umdwebo: izici, umsebenzi izincazelo, ukubuyekezwa
Utamatisi "Rio Grande": Abalimi Izibuyekezo
UCesar Frank: biography, izithombe namaqiniso athakazelisayo
Okufanele ukwenze ngesikhathi tattoo iqakala?
Izizathu ukwamukelwa kobuKristu eRussia
Ilayisi nge amakhowe. Lezi izindlela ezahlukene
Le filimu "side effect": nabalingisi izindima, indaba
"Kubakhethi": analogue, imiyalelo, ukubuyekezwa kwesicelo
Yeka indlela efanele ngayo ukusanga nomfana. Amathiphu Kwabaqalayo Namantombazane Awaziwayo